सिकेलाई भित्राएर विप्लवलाई निषेध गरेर सरकारले गल्ती गर्‍याे: सिपी मैनाली
रिपोर्ट नेपाल | 2019 Mar 29 | 11:49 am	134
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)का महासचिव सिपी मैनाली नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका नायक हुन् । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्ष र कम्युनिष्टको संगठन विस्तारका क्रममा थुप्रै पटक लामो जेल जिवन विताएका मैनाली भद्र स्वभावका मानिन्छन् । राजनीतिक विश्लेषण गर्न अब्बल मानिने मैनाली आफूलाई लागेका कुरा ढुक्कसँग बताउँन सक्ने नेता हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री मैनालीसँग रिपोर्ट नेपालका लागि गरिएको संक्षिप्त कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं ।
सरकारले सिके राउतलाई तामझामका साथ भित्राउनु र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व नेकपाको गतिविधि निषेध गर्नुलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
सिके राउत स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएर चर्चामा आएका हुन् । उनी यतिखेर जनमत नामको पार्टी बनाएर अघि बढेका छन् । सरकार राउत मुलधारमा आएको भन्दै चर्को भाषण गर्दै हिडेको छ । सिके राउत हालका लागि पार्टी लिएर अघि बढ्न खोजे पनि उनको राणनीति यात्रा अर्कै छ । आफ्नो रणनीति सफल भएका दिन उनी आफ्नो मिसनमा फर्कने कुरामा दुविधा छैन । सरकार एकातर्फ सिकेलाई भित्राउछ त अर्का तर्फ नेत्रविक्रम चन्द समुहलाई घरपकड र निषेध गर्छ यो सरासर गलत काम हो । स्वयम् नेपाली सेनाले पनि धरकपडले समस्या समाधान नहुने निश्कर्ष निकालेको छ । निषेधको राजनीतिले मुलुकमा शान्ति होइन कि द्वन्द बढाउँछ भन्ने कुरा सरकाले बुझ्न जरुरी छ ।
हतियार बोकेर हिड्ने र चन्दा आतंक मच्चाउनेलाई छुट दिने त भनेर सरकारले त उल्टो प्रश्न गर्दैछ त ?
चन्द नेतृत्वको माओवादीले राखेको राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्ने र गलत मागबारे जनतालाई बताउन पनि त सकिन्छ । तपाई आफैं भन्नुस् त निषेधले समाधान गर्छ कि द्वन्द निम्ताउँछ ? सरकारको निषेध कदमले द्वन्द र मुढभेढ निम्ताउने कुरामा दुईमत छैन ।
तपाईले सिके राउतले आफ्नो अभिष्ट पुरा भएपछि स्वतन्त्र मधेसकै पक्षमा लाग्ने इंकित गर्नुभयो त्यसो गरे सरकारले कारबाही गर्ने भन्दैछ त ?
सरकार सपनामा डुबुल्की मारिरहेको छ । आफ्नो मिसनका लागि कसैले सुरुमै यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्छ त ! सिकेले संविधान मान्छु भनेर बाहिर नआए जेलमा बसेर मिसन पुरा हुन्छ ?
तपाईको विश्लेषणमा सरकारले सिकेसँग गरेको एघार बुँदे सहमति गलत हो ?
सहमतिपत्र गहन भएर अध्ययन गर्नुहोस् अनि तपाई आफै थाहा पाउनुहुनेछ । एघारबुँदे सहमतिपत्रमा कथित स्वतन्त्र मधेस कतै भट्टाउनु हुन्छ । सिकेको स्वतन्त्र मधेसको रणनीतिक यात्रालाई सरकारले बैधानीकता दिएको छ । दशौं बुँदा पढ्नुहोस् त सिकेलाई त्यो बुँदाले नैतीक अधिकार दिएको छ ।
तपाई सिकेसँग भएको संझौता र विप्लवलाई गरेको निषेध दुबैको विरोध गर्नुहुन्छ, सरकारले त जनताको जन धनको सुरक्षा गर्नुपर्यो होइन र ?
विप्लव समुहले एकीकृत क्रान्तिको नाममा हत्या हिंसाको राजनीति गर्नु गलत हो । जनताको जनधानको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो तर दायित्व पूरा गर्ने नाममा निषेध गर्नु चाही राम्रो हुँदै होइन ।
सरकार त वार्ता गर्ने भनेर धोका दिएको भन्दैछ त ?
ढोका थुनेर वार्तामा आउ भनेर केही पनि आउँदैन । सरकारले प्रतिवन्ध नलगाइकन वार्तामा बोलाउने र गलत कामलाई प्रशासनीक ढंगले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । सरकारले त्यस्तो नगरेर शक्ति प्रगोग गर्दैछ यसले हिंसालाई बढावा दिन्छ । सरकारले निषेध गरेर ठूलो गल्ती गरेको छ । यसलाई पुर्नविचार गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त ब्याक गेयर नलाग्ने भन्दैछन त ?
यस्तै अभिव्यक्तिले आक्रोस बढाउने काम गरेको छ । सरकारको गलत रबैयाले गर्दा मुलुक द्वन्दतिर उन्मुख भइरहेको छ । जुन ज्यादै चिन्ताको विषय हो । दश वर्षे द्वन्दले देश कति पछाडि धकेलियो भन्ने सोच्न जरुरी छ । हिजो शुरुका दिनमा वार्तालाई भन्दा दमनलाई प्राथमिकतामा राख्दा के भयो त्यता पट्टी सोच्नुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं सरकारको काम कारबाही बारे भन्नुपर्दा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
दुई तिहाइको समर्थनमा नेतृत्व गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई गति देला र आर्थिक विकास होला भन्ने जुन सोच थियो त्यो सबै गलत सावित भयो । मुलुकमा रहेको कुशासनलाई सुशासनमा परिणत हुन्छ भन्ने लागेको थियो त्यो सबै भ्रममा परिणत भयो ।
नेपाल प्रहरीमा तीन हजार ५९६ दरबन्दी थप
अष्ट्रेलिया र स्पेनका राजदूतद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण
महराको हिरासत बसाई लम्बियो, १३ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
पत्रकारले शिष्टता विर्सिए, बालाई पनि तपाईँ भन्दैनन् : प्रधानमन्त्री ओली
१२ सय यात्रु बोक्ने रेल सेट निर्माण हुँदै
मनसुन बाहिरिएसँगै चिसो बढ्ने क्रम शुरु
साथीलाई छुरा प्रहार गर्ने पक्राउ
राष्ट्रपति भण्डारी भाेलि म्यान्मा जाँदै
पारस खड्काले दिए राष्ट्रिय क्रिकेटको कप्तानबाट राजीनामा
विमानस्थलमा तोडफोड गर्ने सांसद साह विमानस्थलबाटै पक्राउ
फूलमा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, यस वर्ष आयातीत फूलमा कमी